Magacyada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Aqalka sare ee maanta lagu doortay Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Magacyada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Aqalka sare ee maanta lagu doortay Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu doortay illaa seddax xildhibaan oo ka mid noqon doonna Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona doorashadaasi ay u dhacday si deganaan ah.
Doorashadaan oo ay ku loolamayeen illaa 10 musharax oo kasoo jeeda beelaha dega gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa waxaa ku guuleystay illaa seddax musharixiin.
Kursigii koowaad waxaa ku guuleysatay Nuuro Faarax Jaamac oo heshay codad gaaraya 38 cod, waxaana la taramaayay Cumar Maxamed Aadan (Qaadi) oo helay 7 cod iyo Caasho Axmed Cabdalla oo aan waxba helin.
Sidoo kale, kursiga labaad waxaa kusoo baxay Deeqo Xasan Xuseen oo heshay 24 cod, waxaana la tartamaayay Hodan Abuukar Xasan oo iyadana heshay 21 cod iyo Amran Cilmi oo aan wax cod ah helin.
Ugu dambeyntii, kursiga seddaxaad waxaa ku guuleystay Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo helay 39 cod, waxaana la tartamaayay Xuseen Ceelabe Faahiye, Maxamed Aadan Waaberi iyo Axmed Cabdi Faahiye.
Maalmaha soo socdo ayaa la filayaa in la doorto labada xubnood ee gobalada waqooyi ka harsan Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona kadib la guddo gali doonno doorashada guddoonka Aqalka Sare iyo ku-xigeenadiisa.